မေလ 2022 ခုနှစ်အတွက် Forex Trading စတင်သူများအတွက်လမ်းညွှန်
Beginners များအတွက် Forex Trading: Forex ကိုမည်သို့ရောင်းဝယ်ပြီးအကောင်းဆုံးပလက်ဖောင်းကိုရှာရမည်နည်း
နောက်ဆုံးရေးသားချိန်: 19 မေလ 2022 အချက်အလက်စစ်ပြီးပြီ
ဤဆောင်းပါးကို ရေးသားသည့်အချိန်တွင် အတိကျဆုံးအချက်အလက်များကို ထင်ဟပ်စေရန် အမှန်ခြစ်ထားပါသည်။
စတင်ရန်ရှာဖွေနေသည်။ Forex ကုန်သွယ် အွန်လိုင်း၊ ဒါပေမယ့် ဘယ်မှာစရမလဲဆိုတာ မသေချာသေးဘူး။ ကောင်းပြီ၊ မင်းရဲ့ Forex အရောင်းအ၀ယ်အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းကို မှန်ကန်တဲ့ခြေထောက်ပေါ်တင်နိုင်ဖို့ မင်းသိထားသင့်တဲ့အရာအားလုံးကို ငါတို့ပြသမှာဖြစ်လို့ မင်းသေချာပေါက် မှန်ကန်တဲ့နေရာကိုရောက်နေပါပြီ။
စက်မှုလုပ်ငန်းကိုယ်နှိုက်ကပုံမှန်အားဖြင့်ထရီလီယံနှင့်ပေါင်တန်ဘိုးရှိသောငွေကြေးများသည်နေ့စဉ်လက်များကိုပြောင်းလဲနေသည်ကိုတွေ့မြင်ရသည့်အတွက်သင်သည်လက်လီရောင်းဝယ်သူများနှင့်အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာရင်းနှီးမြုပ်နှံသူများနှင့်အတူပါလာလိမ့်မည်။ ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်သဘောတရားက GBP နှင့် USD တို့ကဲ့သို့သောယှဉ်ပြိုင်သည့်ငွေကြေးနှစ်ခုအကြားစျေးနှုန်းလှုပ်ရှားမှုများကိုအမြတ်ထုတ်ရန်ဖြစ်သည်။
ဒီဝန်ဆောင်မှုပေးနှင့်အတူ CFDs အရောင်းအဝယ်ဖြစ်သည့်အခါလက်လီရင်းနှီးမြှုပ်နှံအကောင့်အသစ်များ၏ 71% ပိုက်ဆံရှုံးသည်။
အခုပဲ Eightcap ကို သွားကြည့်လိုက်ပါ။
မည်သို့ပင်ဆိုစေငါတို့လမ်းညွှန်အပေါ်ဖတ်ရှုဖို့အကြံပြုလိမ့်မယ် Beginners များအတွက် Forex Trading: Forex ကုန်သွယ်ခြင်းနှင့်အကောင်းဆုံးပလက်ဖောင်းကိုမည်သို့ရှာရမည်နည်း စတင်မတိုင်မီ။ ကျွန်ုပ်တို့သည်သင့်အား Forex မည်သို့အလုပ်လုပ်သည်ကိုအကောင်းနှင့်အပြင်ထုတ်ပေးရုံသာမက ၂၀၂၀ အတွက် Forex ပွဲစားရွေးသူ ၃ ဦး ကိုလည်းစာရင်းပြုစုပါမည်။
မှတ်စု: Forex Space တွင် ကုန်သွယ်မှုအခွင့်အလမ်းများကို မည်ကဲ့သို့ဖော်ထုတ်ရမည်ကို လေ့လာခြင်းသည် လွယ်ကူသောလုပ်ဆောင်ချက်မဟုတ်ပါ။ ထို့ကြောင့် သင့်ကိုယ်ပိုင်ငွေများကို မစွန့်စားမီ မှန်ကန်စွာ ရောင်းဝယ်နည်းကို လေ့လာရန် လိုအပ်ပါသည်။
Forex Trading ၏ကောင်းကျိုးနှင့်ဆိုးကျိုးများကားအဘယ်နည်း။
တစ်ကမ္ဘာလုံးတွင်အရောင်းအ ၀ ယ်အများဆုံးဈေးကွက်တစ်ခုဖြစ်သည်
ကုန်သွယ်ရန် 100 ကျော်ထက်ပိုသောအားလုံးအတွက်အတွဲ
Forex စျေးကွက်များမှာ ၂၄/၇ ဖြစ်သည်
Forex Trading ကဘာလဲ?
Forex - FX ဟုလည်းခေါ်သောနိုင်ငံခြားငွေကိုဆိုလိုသည်။ ၎င်း၏အခြေခံအကျဆုံးပုံစံ, Forex ကုန်သွယ် အခြားတစ်ခုသို့ငွေကြေးလဲလှယ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်ဖြစ်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ သင်သည် GBP ကိုယူရိုငွေနှင့်လဲလှယ်ပါက၎င်းသည် Forex ကုန်သွယ်မှုကိုကိုယ်စားပြုလိမ့်မည်။ ထိုသို့ပြောခြင်းဖြင့် Forex trading သည်ကမ္ဘာပေါ်တွင်ငွေကြေးအရဆုံးစျေးကွက်တစ်ခုဖြစ်သည်။
တကယ်တော့ဘဏ်ကြီးတွေကနေ့စဉ်ပေါင်ထရီလီယံတန်ကြေးရှိတဲ့ကုန်သွယ်ရေးတွေကိုကုန်သွယ်နေကြတယ်။ ၎င်းသည်အချိန်ကတည်းကလက်လီအရောင်းဆိုင်သို့ရောက်ရှိခဲ့သည့်အဓိကအကြောင်းပြချက်များထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည် တစ်ရက်ကုန်သွယ် ကဏ္။ ။ အရေးကြီးသည်မှာယခုအခါသင့်ကိုယ်ပိုင်အိမ်မှသက်သောင့်သက်သာရှိသည့်မိုဘိုင်းဖုန်းမှပင်ငွေများစွာဝယ်ယူ၊ ရောင်းချခြင်းနှင့်ရောင်းဝယ်ခြင်းကိုပြုလုပ်နိုင်သည်။
ကုန်သွယ်မှု Forex ၏အဓိကအကြောင်းရင်းတစ်ခုမှာသင်သည်ငွေကြေးတစ်ခု၏တန်ဖိုးသည်အခြားတစ်ခုနှင့်တစ်ခုဆုတ်ယုတ်သွားမည်လားဆိုသည်ကိုသင်ခန့်မှန်းနေခြင်းဖြစ်သည်။ FX အရောင်းအဝယ်သည်ငွေကြေး“ pair တစုံ” အပေါ်တွင်အခြေခံသည်။ ၎င်းတွင်ပြိုင်ဆိုင်မှုရှိသောငွေကြေးနှစ်ခုပါဝင်သည်။ ဥပမာ GBP / USD သည်ကုန်သည်များသည်ပေါင်စတာလင်နှင့်အမေရိကန်ဒေါ်လာနှင့် ပတ်သက်၍ ထင်ကြေးပေးကြသည်။ EUR / CHF သည်ယူရိုနှင့်ဆွစ်ဖရန့်တို့ဖြင့်ဖွဲ့စည်းလိမ့်မည်။
အမြတ်အစွန်းရဖို့အတွက်ဘယ်စျေးကွက်ကဘယ်လမ်းကိုသွားမယ်ဆိုတာကိုခန့်မှန်းပြီးရင်ဘယ်လောက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမလဲဆိုတာကိုဆုံးဖြတ်ရမှာပါ။ အချို့သော Forex ပွဲစားများသည်လူသစ်ကုန်သည်များအတွက်သာသီးသန့်သီးသန့်ထားရှိပေးသောကြောင့်သင်အနည်းငယ်ပေါင်အရောင်းအ ၀ ယ်မှစတင်နိုင်ပါသည်။ ဤသည်မှာငွေအမြောက်အမြားကိုမစွန့်စားဘဲ Forex Trading ၏အထွက်များနှင့်အပြင်ကိုလေ့လာရန်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်သည်။
အွန်လိုင်းရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုနေရာတွင်တက်ကြွစွာပါဝင်နေသောအခြားပိုင်ဆိုင်မှုအတန်းများကဲ့သို့ပင် Forex trading ၏ကျယ်ပြန့်သောအယူအဆမှာငွေရှာရန်ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်ကုန်သွယ်မှုနှင့်သက်သောင့်သက်သာရှိသောငွေကြေးအတွဲတစ်ခုကိုရွေးချယ်ပြီးစျေးကွက်များမည်သို့ထင်မြင်မည်ကိုဆုံးဖြတ်ရန်လိုအပ်သည်။
သင်ကုန်သွယ်မှုတစ်ခုမပြုမီ, ငွေကြေး pair တစုံသည်ပုံမှန်အားဖြင့်မည်သို့သောပုံနှင့်တူသည်ကိုနားလည်ရန်လိုအပ်သည်။ Pair များသည်ငွေကြေးနှစ်ခုလုံးနှင့်အမြဲတမ်းတည်ရှိနေမှာဖြစ်ပြီး၎င်းသည်စျေးနှုန်းကို real-time လဲလှယ်မှုနှုန်းအပေါ်အခြေခံသည်။
မှတ်စု: တစ်စုံတစ်ခု၏ ဘယ်ဘက်ခြမ်းငွေကြေးသည် တန်ဖိုးတက်လာမည်ဟု သင်ထင်ပါက 'ဝယ်သည်' အမှာစာတစ်ခုပြုလုပ်ရန် လိုအပ်ပါသည်။ တနည်းအားဖြင့် သင်သည် ညာဖက်မှငွေကြေး တိုးလာမည်ဟု ထင်ပါက၊ သင်သည် 'ရောင်း' အမှာစာတစ်ခု ပြုလုပ်ရန် လိုအပ်သည်။
Forex Trading ဥပမာ ၁ - GBP / USD ဖြင့် ၀ ယ်ပါ
မြူခိုးကိုရှင်းလင်းနိုင်ဖို့ GBP / USD ကိုသင်ရောင်းဖို့သင်ဆုံးဖြတ်သည်ဆိုပါစို့။ Forex လောကတွင်ဤငွေကြေးစုံကို 'The Cable' ဟုလူသိများသည်။ ရက်ပေါင်းများစွာကြာအောင်ဇယားများကိုလေ့လာပြီးနောက် GBP သည်အသားတင်ကျဆင်းတော့မည်ကိုသင်ယုံကြည်စိတ်ချသည်။ ဆိုလိုသည်မှာစျေးကွက်များကအမေရိကန်ဒေါ်လာနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်စျေးနှုန်းတက်လိမ့်မည်ဟုယုံကြည်ကြသည်။
GBP / USD ၏လက်ရှိစျေးနှုန်း 1.40 မှာစျေးနှုန်းဖြစ်ပါတယ်။
ဆိုလိုသည်မှာ£ 1 တိုင်းအတွက်သင်ဒေါ်လာ ၁.၄၀ ရလိမ့်မည်။
GBP သည် USD နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်စျေးနှုန်းတက်လိမ့်မည်ဟုသင်ထင်သလောက်ဝယ်ယူရန်မှာကြားရန်လိုအပ်သည်။
ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ GBP ဟာဘယ်ဘက်ခြမ်းမှာရှိနေလို့ပါ။
သင်£ 500 လောင်းရန်ဆုံးဖြတ်။
သင်၏မှာယူမှုကိုပြုလုပ်ပြီးနှစ်နာရီအကြာတွင် GBP / USD သည် ၁.၅ ဒေါ်လာကျသင့်သည်။
၁.၄၀ နဲ့ဝယ်လိုက်တာနဲ့ ၀ ယ်လိုက်တာနဲ့အမြတ် ၇.၁၄% ရတယ်။
ထို့ကြောင့်သင်၏ပေါင် ၅၀၀ ကုန်သွယ်မှုသည်အမြတ်ငွေပေါင် ၃၅.၇၀ ရရှိခဲ့သည်။
မှတ်စု: အထက်ဖော်ပြပါ ဥပမာမှ သင်တွေ့မြင်ရသည့်အတိုင်း၊ သင်သည် [A] တွင် ဝယ်ယူမှုတစ်ခုကို 1.40 တွင် တင်ခဲ့ပြီး [B] GBP/USD 1.50 သို့ တိုးလာသောကြောင့် အမြတ်ရခဲ့သည်။
Forex Trading ဥပမာ ၂ - GBP / USD ဖြင့်အမှာစာရောင်းပါ
အရာရာကိုရိုးရှင်းစေရန် GBP / USD တွင်ဥပမာတစ်ခုကိုအတူကြည့်ကြပါစို့။ ဒီတစ်ခေါက်လောက်ပဲရောင်းဖို့အမှာလိုက်မှာပဲ။ အဘယ်ကြောင့်? ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ငါတို့ USD ၏စျေးနှုန်းသည် GBP နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်မြင့်တက်လိမ့်မည်ဟုထင်သောကြောင့် အမှုအရာနည်းနည်းရှုပ်ထွေးရနေရာအရပ်ဖြစ်၏။
ကျနော်တို့ကအမေရိကန်ဒေါ်လာလိမ့်မည်ဟုခန့်မှန်းနေကြသည်ပေမယ့် တိုးမြှင့်လာသည်ငွေလဲနှုန်းလိုတယ် ဆင်း။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် USD သည်နှစ်ဖက်၏ညာဘက်ခြမ်းတွင်ဖြစ်သောကြောင့်ငွေလဲနှုန်းသည်ပေါင်မဟုတ်ဘဲဒေါ်လာအပေါ်အခြေခံသည်။
ထိုစကားဖြင့်၊ GBP/USD အရောင်းအမှာစာ၏ ပုံသဏ္ဌာန် အမြန်ဥပမာကို ကြည့်ကြပါစို့။
USD စျေးတက်လာမည်ဟု ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်သောကြောင့် GBP ကျဆင်းစေလိုပါသည်။
တစ်ဖန်ကုန်သွယ်ရေးတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်ပေါင် ၅၀၀ မျှဝေသည်။
ထိုနေ့နှောင်းပိုင်းတွင် GBP / USD သည် ၁.၃၅ သို့ကျသွားသည်။
ငွေလဲနှုန်းကို လျှော့ချလိုက်ခြင်းကြောင့် USD သည် GBP နှင့် ပိုမိုအားကောင်းလာခြင်းကို ဆိုလိုပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏အမြတ်ရရှိမှုနှင့်အတူကျေနပ်ရောင့်ရဲပြီးရောင်းအားမှာအမြတ်ငွေ ၃.၅၇% ဖြစ်ပြီး၊
ကျွန်ုပ်တို့၏ပေါင် ၅၀၀ အစုရှယ်ယာတွင်ပေါင် ၁၇.၈၄ ရရှိခဲ့သည်။
မှတ်စု: အထက်ဖော်ပြပါ ဥပမာမှ သင်တွေ့မြင်ရသည့်အတိုင်း၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် ရောင်းရန်အမှာစာတင်ထားသောကြောင့် GBP/USD စျေးနှုန်းကျဆင်းသွားသောအခါတွင် ကျွန်ုပ်တို့ အမြတ်ရရှိခဲ့ပါသည်။
Forex Trading Pairs: အဓိက, အရွယ်မရောက်သေးသူများနှင့် Exotics
ဒါကြောင့်ယခုမှာကြားခြင်းနှင့်ရောင်း ၀ ယ်ခြင်းဟာပုံမှန်အလုပ်လုပ်ပုံကိုသိပြီဆိုရင်ငါတို့ရောင်းချင်တဲ့ငွေကြေးအမျိုးအစားကိုအခုစဉ်းစားဖို့လိုတယ်။ FX အရောင်းအ ၀ ယ်လောကတွင်၎င်းကိုအမျိုးအစားသုံးမျိုးခွဲခြားထားသည်။
ကမ္ဘာပေါ်တွင်အရောင်းအ ၀ ယ်အများဆုံးသောငွေကြေးများကိုအဓိကငွေကြေးအဖြစ်သိကြသည်။ ၎င်းတွင် GBP၊ EUR၊ USD၊ JPY နှင့် CHF တို့ပါဝင်သည်။ ထိုစုံတွဲကိုယ်တိုင်၏စည်းကမ်းချက်များအရဗိုလ်ကြီးများသည်အဓိကငွေကြေးနှစ်ခုဖြင့်အမြဲတမ်းတည်ရှိလိမ့်မည်။ ဥပမာ GBP / USD သို့မဟုတ် USD / JPY ။
အရောင်းအ ၀ ယ်ကုမ္ပဏီများသည်သင်စတင်သည့်အချိန်တွင်အထူးခြားဆုံးရွေးချယ်မှုဖြစ်သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်အဓိကအားဖြင့်ငွေအများစုဖြင့်ငွေထုတ်ချေးခြင်းမှအကျိုးရှိသည်၊
စိတ်မပူပါနဲ့၊ ငါတို့ကဖုံးအုပ်ပေးမယ်။ ပျံ့နှံ့ နောက်မှအသေးစိတ်။
အရွယ်မရောက်သေးသူများသည်ဗိုလ်ကြီးများထက်အရည်နည်းသည်။ အသေးစားစုံတွဲတစ်တွဲ၏တစ်ဖက်တွင်အဓိကကျသောငွေကြေးရှိလိမ့်မည်၊ နောက်တစ်ဖက်တွင်မူအားနည်းသောငွေကြေးရှိလိမ့်မည်။ ဥပမာ USD / NZD သည်အဓိကကျသောငွေကြေးအဖြစ်အမေရိကန်ဒေါ်လာနှင့်နယူးဇီလန်ဒေါ်လာသည်အရည်အတွက်နည်းသောငွေကြေးကိုကိုယ်စားပြုလိမ့်မည်။
Ex️ Exotics တွေ၊
သင့်တွင် စွန့်စားလိုစိတ် ပိုမိုမြင့်မားပါက၊ သင်သည် ထူးခြားဆန်းပြားသောအတွဲများကို အရောင်းအဝယ်ပြုလုပ်ရန် စဉ်းစားလိုပေမည်။ ၎င်းတို့တွင် GBP ကဲ့သို့သော အဓိကငွေကြေးတစ်ခုနှင့် တူရကီ Lira ကဲ့သို့သော ထွန်းသစ်စငွေကြေးတစ်ခု ပါဝင်သည်။ ထူးခြားဆန်းပြားသောအတွဲများသည် ငွေရေးကြေးရေးအဖွဲ့အစည်းများထံမှ ၀ယ်လိုအားအလွန်နည်းသောကြောင့် ပြန့်နှံ့မှုပိုမိုမြင့်မားလာမည်ဖြစ်သည်။
သင်ဟာထူးခြားဆန်းပြားသောအတွဲများသည်အဓိကနှင့်အရွယ်မရောက်သေးသူများထက်များစွာ ပို၍ တည်ငြိမ်မှုရှိသည်ကိုသင်တွေ့လိမ့်မည်။ ထို့ကြောင့်သင်၏အမြတ်အစွန်းနှင့်ဆုံးရှုံးမှုများကိုပိုမိုကျယ်ပြန့်စေလိမ့်မည်။
Forex အာကာသတွင်အသုံးများဆုံးအသုံးအနှုန်းများအနက်တစ်ခုမှာ 'ပြန့်ပွားခြင်း' ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့လမ်းညွှန်တွင်အစောပိုင်း၌သင်ရောင်းခြင်းနှင့်ရောင်းချခြင်းအမှာစာကိုမည်သို့ဥပမာပေးခဲ့ကြောင်းသင်မှတ်မိနိုင်သည်။ ကောင်းပြီ, ပြန့်ပွားရိုးရှင်းစွာဝယ်စျေးနှင့်ရောင်းစျေးနှုန်းအကြားခြားနားချက်ဖြစ်ပါတယ်။ ဘာကြောင့်ခြားနားမှုရှိရတာလဲလို့သင်စဉ်းစားမိရင်ဒါက Forex ပွဲစားတွေကသူတို့ပိုက်ဆံတွေကိုပြန့်ပွားအောင်လုပ်ပေးလို့ပါ။
လူပြိန်းသဘောအရ အဝယ်နှင့်ရောင်းဈေးကြား ကွာဟမှု ကျယ်လေလေ၊ သွယ်ဝိုက်၍ အခကြေးငွေပေးချေလေလေ၊ ဥပမာအားဖြင့်၊ EUR/USD ၏ ဝယ်ဈေးမှာ 1.10 ဖြစ်ပြီး ရောင်းဈေးမှာ 1.11 ဖြစ်သည်ဆိုပါစို့။ ဆိုလိုသည်မှာ ပျံ့နှံ့မှုပမာဏမှာ 0.9% ဖြစ်သည်။
သို့သော် Forex trading လောကတွင်ပြန့်ပွားနှုန်းကိုတစ် ဦး နှုန်းရာခိုင်နှုန်းအဖြစ်ရည်ညွှန်းခြင်းမဟုတ်ပါ။ ဆန့်ကျင်တွင်ကျွန်ုပ်တို့သည် 'pips' တွင်ပြန့်ပွားတွက်ချက်။
မှတ်စု: Pip သည် 'အမှတ်များတွင် ရာခိုင်နှုန်း' ကို ကိုယ်စားပြုသည်။ ဤသည်မှာ ပွင့်လင်းစျေးကွက်တွင် ငွေကြေးအတွဲတစ်ခုရွှေ့နိုင်သည့် အသေးငယ်ဆုံးပမာဏဖြစ်သည်။
တိကျသော pip တွက်ချက်မှုသည် မေးခွန်းရှိငွေကြေးအပေါ် အခြေခံသည်။ ထိုသို့ပြောခြင်းဖြင့်၊ USD ဖြင့်စျေးနှုန်းသတ်မှတ်ထားသောမည်သည့်တစ်စုံမဆိုပုံမှန်အားဖြင့် 1 pip ပမာဏကို $0.0001 သို့တွေ့မြင်ရမည်ဖြစ်သည်။ pip ကိုဆုံးဖြတ်ရန်အဘယ်ကြောင့်ထိုကဲ့သို့သောသေးငယ်သောတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကိုအသုံးပြုသည်ကိုသင်အံ့သြနေလျှင်, ဒါက forex ကုန်သွယ်မှုဘယ်လိုအလုပ်လုပ်တယ်။
ခင်ဗျားတို့မြင်နေရပြီ၊ ငါတို့အခုပဲပေးခဲ့တဲ့ကုန်သွယ်ရေးဥပမာတွေမှာငါတို့ရဲ့စျေးနှုန်းတွေကိုဒalsမကိန်းနှစ်ခုနဲ့ဖော်ပြခဲ့တယ် (ဥပမာ ၁.၄၀၊ ၁.၃၅ စသည်ဖြင့်) ။ သို့သော် Forex အရောင်းအဝယ်သည်အလွန်သေးငယ်သောစျေးနှုန်းလှုပ်ရှားမှုများအပေါ်အခြေခံသည်။ ဆိုလိုသည်မှာအတွဲအများစုသည်ဒdecမကိန်း ၄ ခုအထိရှိသည်။
မည်ကဲ့သို့လုပ်ဆောင်ပုံ၏ အမြန်ဥပမာကို ကြည့်ခြင်းသည် အကောင်းဆုံးဖြစ်နိုင်သည်။ pips လက်တွေ့လုပ်ဆောင်ပါ။
Forex အတွက် Pips ၏ဥပမာ
ယူရိုငွေကိုအမေရိကန်တစ်ဒေါ်လာနဲ့ရောင်းနေတယ်လို့ဆိုကြပါစို့၊ ဒါကြောင့်ငါတို့ဟာယူရို / အမေရိကန်ဒေါ်လာစုံတွဲကိုရွေးချယ်ကြမယ်။ အမေရိကန်ဒေါ်လာနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်ယူရိုသည်တန်ဖိုးပိုမိုများပြားလိမ့်မည်ဟုကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်သည်။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည် ၀ ယ်ရန်အမှာစာလိုအပ်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည် 1.2050 တွင် EUR/USD ဖြင့် ဝယ်ယူရန်အမှာစာတင်ထားပါသည်။
သင်တွေ့မြင်ရသည့်အတိုင်း၊ EUR/USD သည် ဒဿမ4သို့ ထွက်သွားသည်။
ထို့ကြောင့်နောက်ဆုံးဒdecimalမ ၁ သည်ရွေ့လျားတိုင်းအချိန်တိုင်း ၁ လုံးကိုပြသည်။
ဥပမာ USD / USD သည် 1.2050 မှ 1.2053 သို့သွားလျှင်၎င်းသည်3pips ကိုကိုယ်စားပြုလိမ့်မည်။
ဒါကြောင့်ယခုသင်ပြန့်ပွားခြင်းနှင့် pips နှစ်ခုလုံးကဘာလဲဆိုတာသိပြီဆိုလျှင်၊ သင့်ကိုလက်တွေ့လောကဥပမာတစ်ခုပေးနိုင်သည်။ ရိုးရှင်းအောင်ထားရန်၊ ယူရို၊
ကျွန်ုပ်တို့ EUR / USD အရောင်းအဝယ်ပြုလုပ်နေစဉ်တွင်၊ ဝယ်ယူမှုအမှာယူရိုသည်အမေရိကန်ဒေါ်လာထက်စျေးနှုန်းတက်လိမ့်မည်ဟုကျွန်ုပ်တို့ထင်သည်ကိုပြလိမ့်မည်။
အလားတူစွာအရောင်းအ ၀ ယ်ကအမေရိကန်ဒေါ်လာဟာယူရိုကျော်ထက်ပိုများလိမ့်မယ်လို့ထင်တယ်လို့ဆိုလိုတာပါ။
၀ ယ်သူသည် ၀.၁၅၉ ဖြစ်ပြီးရောင်းဈေးမှာ ၀.၁၆၀၀ ဖြစ်သည်။
၎င်းသည် 0.0010 ၏ ခြားနားချက်ကို ကိုယ်စားပြုသည်။
ထိုကဲ့သို့သောအဖြစ်, ပြန့်ပွား 10 pips ဖြစ်ပါတယ်။
အချို့ပွဲစားများသည် ၀.၇ ဒေါ်လာသာသောယူရို / အမေရိကန်ဒေါ်လာသာရှိသောကြောင့်၎င်းသည်အလွန်စျေးကြီးသည်။
Forex Trading သည့်အခါသြဇာသက်ဆိုင်သည်
ဒါကြောင့်ယခုသင်သည် Forex ကုန်သွယ်ရေးလက်တွေ့တွင်မည်သို့အလုပ်လုပ်နိုင်ကြောင်းနှင့်ပြန့်ပွားခြင်းနှင့် pips နှစ်ခုလုံးကိုနားလည်ခြင်းစသည်တို့ကိုခိုင်မာစွာသဘောပေါက်လာပြီဖြစ်ရာကျွန်ုပ်တို့သည်ယခုအခါသြဇာကိုစူးစမ်းလေ့လာတော့မည်ဖြစ်သည်။ အတိုချုပ်ပြောရရင် leverage ဆိုတာသင့်အကောင့်ထဲမှာရှိတာထက်ပိုပြီးကုန်သွယ်ရန်ခွင့်ပြုသည်။ သင်၏အမြတ်ကိုတိုးမြှင့်နိုင်ရန်အတွက်သင်သည် Forex ပွဲစားထံမှငွေများကိုထိထိရောက်ရောက်ချေးယူသည်။
တစ်ဖက်တွင်ကုန်သွယ်မှုသည်သင်၏မျက်နှာသာရလျှင်၎င်းသည်အမြတ်များစွာရရှိနိုင်သည်။ ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်ပျက်ခဲ့လျှင်သို့သော်၎င်းသည်ကြီးမားသောဆုံးရှုံးမှုများကိုဖြစ်စေနိုင်သည်။ ထို့ကြောင့်သင်၏အရောင်းအ ၀ ယ်များတွင်သြဇာသက်ရောက်သောအခါသင်သည်အလွန်သတိထားရန်လိုအပ်သည်။ အမှန်မှာ၊ သင်၏ကုန်သွယ်မှုများတွင်ရပ်တန့်ခြင်းဆုံးရှုံးမှုများကိုမည်သို့မည်ပုံမည်သို့တပ်ဆင်ရမည်ကိုကောင်းစွာနားမလည်ပါက၎င်းသည်တစ်ခုလုံး၏သြဇာကိုရှောင်ရှားသင့်သည်။
Forex ကိုအရောင်းအဝယ်လုပ်သောအခါသင်ဘယ်လောက်အထိအသုံးချနိုင်မည်ကိုမရှင်းပြမီ၊ သြဇာသက်ရောက်သောကုန်သွယ်မှုဥပမာကိုကြည့်ကြစို့။
Forex Trading အတွက်သြဇာကိုအသုံးပြုခြင်း၏ဥပမာ
ငါတို့ GBP / USD ရောင်းနေတယ်ဆိုပါစို့။ ရိုးရှင်းအောင်ထားရန်၊ လက်ရှိငွေလဲနှုန်းသည် ၁.၅ ဖြစ်သည်။
ကျနော်တို့ GBP ၏အနာဂတ်စျေးနှုန်းနှင့်ပတ်သက်။ ယုံကြည်မှုရှိပါတယ်, ဒါကြောင့်ကျနော်တို့ကဝယ်ရန်အမှာထားရန်ဆုံးဖြတ်။
ကျွန်ုပ်တို့၏စုစုပေါင်းရှယ်ယာသည်ပေါင် ၂၅၀ ဖြစ်သည်။
ကျနော်တို့ 10: 1 မှာသြဇာလျှောက်ထားသည်အတိုင်း, ငါတို့ကပေါင် 2,500 သာ margin အဖြစ်သာထားသော်လည်း, ငါတို့ထိရောက်စွာ£ 250 နှင့်အတူကုန်သွယ်နေကြသည်။
တစ်နေ့တာတွင် GBP သည် ၂% တိုးလာသည်။
ပေါင် ၂၅၀ ရောင်းဝယ်မှုသည်အမြတ် ၅ ပေါင်သာရှိသည်။
သို့သော်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် 10:1 ၏ leverage ကိုအသုံးပြုခြင်းဖြင့်၊ ကျွန်ုပ်တို့၏အမြတ်ငွေများကို £50 (£5 x 10) သို့ ချဲ့ထွင်ထားပါသည်။
အောင်မြင်သော leverage ကုန်သွယ်မှုသည် သင့်အမြတ်အစွန်းအတွက် ဖြစ်နိုင်သကဲ့သို့ အန္တရာယ်များသည် အလွန်မြင့်မားပါသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် သင်၏ဆုံးရှုံးမှုများကို ချဲ့ထွင်နိုင်သည် - နှင့် လျင်မြန်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ကြီးကျယ်သောကုန်သွယ်မှုတစ်ခုကို ပြုလုပ်သောအခါ၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် အနားသတ်ကိုထည့်ရန် လိုအပ်ပါသည်။ အထက်ဖော်ပြပါ ဥပမာတွင်၊ ၎င်းသည် စုစုပေါင်းကုန်သွယ်မှုအရွယ်အစား၏ 10% ဖြစ်သောကြောင့် leverage ratio သည် 10:1 ဖြစ်သည်။ အလားတူပင်၊ leverage သည် 25:1 ဖြစ်ပါက၊ £25,000 ကုန်သွယ်မှုတစ်ခုသည် margin အတွက် £1,000 လိုအပ်မည်ဖြစ်ပါသည်။
မှတ်စု: အသိဥာဏ်ရှိသော ရပ်တန့်ဆုံးရှုံးမှုများကို သင်ထည့်သွင်းသောအခါတွင် leverage ဖြင့် ကုန်သွယ်မှု၏အန္တရာယ်များကို သိသိသာသာလျှော့ချနိုင်သည်။
အကယ်၍ သင်၏ကုန်သွယ်မှုသည်နောက်တဖန်သင့်ကိုဆန့်ကျင်ဘက်ပြုပါကသင်၏အကွာအဝေးတစ်ခုလုံးကိုဆုံးရှုံးသွားနိုင်ခြေရှိသည်။ သင်၏ကုန်သွယ်မှုသည်ပမာဏပမာဏနှင့်ညီမျှသောဆုံးရှုံးမှုများကိုကြုံတွေ့ရပါကဤအရာသည်ပေါ်ပေါက်လိမ့်မည်။ ဥပမာအားဖြင့် အကယ်၍ သင်၏အနိမ့်ဆုံးပမာဏသည် ၂၀% (သြဂုတ် ၂၀: ၁) နှင့်သင်၏အမှာစာတန်ဖိုးမှာ ၂၀% တွင်ကျဆင်းသွားပါကသင်၏အနိမ့်ဆုံးဆုံးရှုံးသွားလိမ့်မည်။
သင်ကဗြိတိန်တွင်အခြေစိုက်ပြီးဖြစ်လျှင်ငွေကြေးဆိုင်ရာအပြုအမူအာဏာပိုင်အဖွဲ့မှသတ်မှတ်ထားသော Forex ပွဲစားကိုအသုံးပြုပါ။FCA), ထို့နောက် အွန်လိုင်းကုန်သွယ် European Securities and Markets Authority မှ ချမှတ်ထားသော leverage ကန့်သတ်ချက်များကို လိုက်နာရန် လိုအပ်သည် (ESMA).
၎င်းသည်သြဇာအချိုးကို ၃၀း၁ နှင့်အဓိကအတွဲများ၌ ၁ နှင့် ၂၀: ၁ ကိုအရွယ်မရောက်သေးသူများနှင့်ထူးခြားသောသူများအတွက်ကန့်သတ်ထားသည်။
Forex ကိုအွန်လိုင်းအရောင်းအဝယ်လုပ်ရန်အွန်လိုင်းပွဲစားကိုသင်လိုအပ်လိမ့်မည်။ ကုန်သွယ်ရေးပလက်ဖောင်းဟုလည်းခေါ်ဆိုသောပွဲစားများသည်သူတို့၏ ၀ န်ဆောင်မှုများကိုအသုံးပြုရန်သင့်အားအခကြေးငွေပေးလိမ့်မည်။ ၎င်းတို့တွင်အောက်ပါထဲမှတစ်ခုအပါအ ၀ င်သတ်မှတ်ထားသောအခကြေးငွေသည်ပွဲစားမှပွဲစားနှင့်ကွဲပြားနိုင်သည်။
မတူဘဲ CFDsသင်၏ပွဲစားသည် သင့်အား forex ရောင်းဝယ်ရန် ကော်မရှင်ခကောက်ခံမည်မှာ သေချာပါသည်။ ၎င်းသည် အများအားဖြင့် သင့်ကုန်သွယ်မှု အရွယ်အစားအပေါ် အခြေခံပြီး ရာခိုင်နှုန်းတစ်ခုအဖြစ် တွက်ချက်သည်။
ဥပမာအားဖြင့်ဆိုသော်ကော်မရှင်သည် ၀.၅% ဖြစ်ပြီးသင်၏ကုန်သွယ်မှုတန်ဖိုးသည်ပေါင် ၁၅၀၀ ဖြစ်သည်။ ဆိုလိုတာကသင်ကုန်သွယ်မှုကိုဖွင့်ဖို့သင်ပေါင် ၇.၅၀ ပေးမယ်၊ ပြီးရင်သင်ပိတ်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တဲ့အခါမှာနောက်ထပ် 0.5% ပေးလိမ့်မယ်။
ပြန့်ပွားမှုမည်သို့အလုပ်လုပ်သည်ကိုကျွန်ုပ်တို့ဆွေးနွေးပြီးပြီဖြစ်သော်လည်း၎င်းသည်ထည့်သွင်းစဉ်းစားရန်လိုအပ်သည့်အပိုထပ်ဆောင်းကြေးဖြစ်ကြောင်းအသိအမှတ်ပြုရန်အရေးကြီးသည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ သင်သည် USD / USD ကိုရောင်းနေပြီး၊ ပြန့်ပွားမှုသည် ၂ pips ဖြစ်သည်။ အကယ်၍ သင်သည် ၀ ယ်ယူမှုအမှာစာကိုထားရှိပါက၊ ယူရို / အမေရိကန်ဒေါ်လာ၏ဈေးနှုန်းသည် ၂ ခုအထိတက်ရန်လိုသည်။
သင်၏ဝယ်ရန်အမှာစာစတင်သောအခါ၊ သင်သည် ၂ ချပ်သာချမည်။ အလားတူစွာ၊ အကယ်၍ သင်ဟာအရောင်းအ ၀ ယ်ကိုမှာယူပြီးပြန့်ပွားမှုက ၂ စက္ကန့်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်၊ တောင်မှချိုးဖျက်ဖို့အတွက် ၂ ဒေါ်လာကျသင့်တဲ့အတွက်ယူရို / အမေရိကန်ဒေါ်လာကိုစျေးနှုန်းကျသင့်မှာဖြစ်ပါတယ်။
Forex ပွဲစားနှုန်းဖြင့်ကောက်ခံသောအခြေခံကော်မရှင်သည်ယှဉ်ပြိုင်မှုရှိပုံရသော်လည်းအချို့သော platform များသည်လစဉ်အနည်းဆုံးကော်မရှင်လိုအပ်လိမ့်မည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ အနည်းဆုံးလစဉ်ကော်မရှင်သည်ဒေါ်လာ ၁၀ ဖြစ်ပါကသင်တစ်လလျှင်ဒေါ်လာ ၇ သာပေးလျှင်၊ လိုအပ်ချက်ကိုဖြည့်ဆည်းရန်အပိုဒေါ်လာ ၃ ကိုသင်ပေးရန်လိုအပ်သည်။
သင်၏ Forex အရောင်းအ ၀ ယ်များတွင်သြဇာသက်ရောက်ရန်ဆုံးဖြတ်ပြီးနေ့ချင်းညချင်းဖွင့်ထားခဲ့လျှင်ငွေကြေးအခကြေးငွေပေးဆောင်ရန်လိုအပ်လိမ့်မည်။ ဒီပွဲစားကမင်းချေးထားတဲ့ငွေတွေကိုအတိုးပေးရမယ်ဆိုတော့ high street bank ကငွေချေးတာနဲ့မတူဘူး။
ငွေသွင်းခြင်းနှင့်ငွေထုတ်ခြင်းနှင့် ပတ်သတ်၍ သင်ထည့်သွင်းစဉ်းစားရန်လိုအပ်သည်။ ပွဲစားများအားလုံးအားသွင်းခိုင်းသည်မဟုတ်သော်လည်းအချို့ကလုပ်ကြသည်။
Forex Trading ပလက်ဖောင်းကိုဘယ်လိုရွေးရမလဲ။
ဗြိတိန်ကုန်သွယ်ရေးနယ်ပယ်တွင် Forex ပွဲစားများမလုံလောက်ပါ။ ထိုအရာဖြင့်သင်၏တစ် ဦး ချင်းလိုအပ်ချက်နှင့်ကိုက်ညီသောပလက်ဖောင်းတစ်ခုကိုသင်ရှာဖွေရန်လိုအပ်သည်။
အောက်တွင်ကျွန်ုပ်တို့သည် Forex Trading ပလက်ဖောင်းကိုရွေးချယ်သောအခါသင်ကြည့်ရှုရန်လိုအပ်သောအဓိကအချက်များအချို့ကိုဖြိုဖျက်လိုက်သည်။
Forex ပွဲစားတစ်ဦးသည် UK မှဖောက်သည်များကိုလက်ခံလိုပါက၎င်းကို FCA မှထိန်းချုပ်ရမည်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် FCA လိုင်စင်မရရှိပါက၊ ပွဲစားကို ကုန်ကျစရိတ်အားလုံး ရှောင်ကြဉ်ပါ။
သင်ငွေသွင်းလိုသောငွေပေးချေမှုနည်းလမ်းကိုစဉ်းစားပါ။ ပွဲစားအများစုသည်ဘဏ်ငွေလွှဲနှင့်အကြွေး / အကြွေးကဒ်ကိုလက်ခံကြပြီးအခြားသူများကမူ e-wallets များကိုထောက်ပံ့သည်
သင်ရွေးချယ်သောပွဲစား၏အခကြေးငွေဖွဲ့စည်းပုံကိုအကဲဖြတ်ခြင်း။ ပွဲစားတစ်ယောက်ကကော်မရှင်တစ်ခုကောက်ခံမယ်ဆိုရင်ဒီပမာဏဘယ်လောက်ရှိသလဲ၊ လစဉ်အနည်းဆုံးလိုတာရှိမရှိရှာပါ။
အရောင်းအ ၀ ယ်နှင့်ဆင်တူသည်မှာ Forex ပွဲစားငွေမည်မျှကိုပြန့်နှံ့စေကြောင်းသင်အကဲဖြတ်ရန်လည်းလိုအပ်သည်။ အာကာသအတွင်းစျေးအကြီးဆုံးဖြစ်သောပွဲစားအချို့သည် ၀ န်ဆောင်မှုကို ၀.၇ ရာခိုင်နှုန်းဖြင့်သာရောင်းချကြသည်။
Fore Forex အတွဲအရေအတွက်
ပွဲစား၏ကုန်သွယ်ရေးနယ်ပယ်ကို ဖြတ်၍ ကြည့်ရှုရန်အချိန်အနည်းငယ်ဖြုန်းပါ၊ ၎င်းသည် Forex အတွဲအရေအတွက်မည်မျှရှိသည်ကိုအကဲဖြတ်ရန်။ ကျနော်တို့အများစုနှင့်အရွယ်မရောက်သေးသူအများစုဖုံးလွှမ်းပွဲစားများအပြင်များစွာသော exotics အရေအတွက်ပိုနှစ်သက်။
သင်၏ forex trading အသက်မွေး ၀ မ်းကျောင်းမှုမှအောင်မြင်မှုရရန်ရှာဖွေနေသည်ဆိုလျှင်နည်းပညာညွှန်းကိန်းများမည်သို့အသုံးပြုရမည်ကိုလေ့လာရန်အလွန်အရေးကြီးသည်။ ၎င်းသည်သင်ရွေးချယ်ထားသည့် Forex pair ၏သမိုင်းဆိုင်ရာစျေးနှုန်းများကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာရန်နှင့်စျေးကွက်များမည်သို့နောက်ဆက်တွဲလှုပ်ရှားသွားမည်ကိုဆုံးဖြတ်ရန်ခွင့်ပြုလိမ့်မည်။
၂၀၂၀ အကောင်းဆုံး Forex Trading Platforms
သင့်ကိုယ်ပိုင်ပွဲစားကိုသုတေသနလုပ်ဖို့အချိန်မရှိဘူးလား။ ကျွန်ုပ်တို့အောက်တွင်အကြံပြုထားသည့် Forex trading platform သုံးခုကိုလေ့လာရန်သေချာပါစေ။
၄။ AVATrade - ၂ x ဒေါ်လာ ၂၀၀ Forex Welcome Bonus များ
ယခုအချိန်တွင် AVATrade မှအဖွဲ့သည်ဒေါ်လာ ၂၀၀၀ အထိအမြတ်အစွန်း ၂၀% ကိုအပိုဆုကြေးပေးနေသည်။ ဆိုလိုသည်မှာအများဆုံးအပိုဆုကြေးရရှိရန်သင်ဒေါ်လာ ၅၀၀၀၀ ကိုထည့်သွင်းရန်လိုအပ်သည်။ သတိပြုပါ၊ အပိုဆုကြေးရရန်အနည်းဆုံးဒေါ်လာ ၁၀၀ ကိုသင်သွင်းရန်လိုအပ်ပြီးရန်ပုံငွေများကိုမထည့်သွင်းမီသင်၏အကောင့်ကိုစစ်ဆေးရန်လိုအပ်သည်။ အပိုဆုကြေးထုတ်ယူခြင်းအနေဖြင့်သင်ကုန်သွယ်မှု ၀ ယ်သည့် ၀.၁ ကိုတိုင်းဒေါ်လာ ၁ ဒေါ်လာရလိမ့်မည်။
ဒေါ်လာ ၂၀၀၀ အထိ ၂၀% ကြိုဆိုသည့်အပိုဆုကြေး
ယခု Avatrade သို့ သွားရောက်ပါ။
EightCap သည် ASIC နှင့် SCB မှ အခွင့်အာဏာနှင့် ထိန်းကျောင်းထားသော နာမည်ကြီး MT4 နှင့် MT5 ပွဲစားဖြစ်သည်။ ဤပလပ်ဖောင်းပေါ်တွင် အလွန်အရည်ပျော်သောစျေးကွက် 500+ ကျော်ကို သင်တွေ့လိမ့်မည် - အားလုံးကို CFD များမှတစ်ဆင့် ကမ်းလှမ်းထားသည်။ ဆိုလိုသည်မှာ သင်သည် ကာလတိုရောင်းချခြင်းစွမ်းရည်များနှင့်အတူ လွှမ်းမိုးနိုင်မှုကို ရရှိနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
ပံ့ပိုးပေးထားသော စျေးကွက်များတွင် Forex၊ ကုန်စည်များ၊ အညွှန်းကိန်းများ၊ ရှယ်ယာများနှင့် cryptocurrencies ပါဝင်သည်။ EightCap သည် ပျံ့နှံ့မှုနည်းပါးရုံသာမက စံအကောင့်များအတွက် 0% ကော်မရှင်များ ပေးဆောင်သည်။ ကုန်ကြမ်းအကောင့်တစ်ခုဖွင့်ပါက 0.0 pips မှ အရောင်းအ၀ယ်လုပ်နိုင်ပါသည်။ ဤနေရာတွင် အနည်းဆုံး အပ်ငွေမှာ $100 သာဖြစ်သည်။ သင့်အကောင့်ကို ဒက်ဘစ် သို့မဟုတ် ခရက်ဒစ်ကတ်၊ အီး-ပိုက်ဆံအိတ် သို့မဟုတ် ဘဏ်ဝိုင်ယာဖြင့် ရန်ပုံငွေပေးရန် သင်ရွေးချယ်နိုင်သည်။
၂။ Capital.com - သုညကော်မရှင်များနှင့်အလွန်နိမ့်သောပျံ့နှံ့မှု
Capital.com သည် FCA၊ CySEC၊ ASIC၊ နှင့် NBRB- ထိန်းညှိထားသော အွန်လိုင်းပွဲစားတစ်ခုဖြစ်ပြီး ငွေကြေးဆိုင်ရာ တူရိယာများ အစုအဝေးကို ပံ့ပိုးပေးပါသည်။ CFDs ပုံစံဖြင့် အားလုံးသည် စတော့များ၊ အညွှန်းကိန်းများနှင့် ကုန်ပစ္စည်းများကို အကျုံးဝင်သည်။ သင်သည် ကော်မရှင်အတွက် တစ်ပြားတစ်ချပ်မှ ပေးဆောင်မည်မဟုတ်ပါ၊ ပျံ့နှံ့မှုများသည် အလွန်တင်းကျပ်ပါသည်။ Leverage အထောက်အကူပြုပစ္စည်းများကိုလည်း ကမ်းလှမ်းထားသည် - ESMA ကန့်သတ်ချက်များနှင့်အညီ အပြည့်အဝ။
တစ်ဖန် ထပ်မံ၍ ဤသည်မှာ ၁း၃၀ တွင်အရွယ်မရောက်သေးသူများနှင့် ၁း၂၀ တွင်အရွယ်မရောက်သေးသူများနှင့်ထူးခြားသောအရာများ၌ရပ်တည်နေသည်။ အကယ်၍ သင်သည်ဥရောပပြင်ပတွင်အခြေချနေထိုင်ပါကသို့မဟုတ်သင်ကပရော်ဖက်ရှင်နယ် ၀ န်ဆောင်မှုခံယူသူတစ် ဦး အဖြစ်ယူဆပါကပိုမိုမြင့်မားသောကန့်သတ်ချက်များကိုသင်ရရှိလိမ့်မည်။ Capital.com သို့ငွေထည့်ဝင်ခြင်းသည်လည်းလေပြေတစ်ခုဖြစ်သည်။ ပလက်ဖောင်းသည် debit / credit ကတ်များ၊ e-wallets နှင့် bank account transfer များကိုထောက်ပံ့ပေးသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ အကောင်းဆုံးအနေဖြင့်သင်စတင်£ 1 / $ ဖြင့်စတင်နိုင်ပါသည်။
FCA၊ CySEC၊ ASIC နှင့် NBRB တို့က စီမံထားသည်။
လက်လီရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူအကောင့်များ၏ 75.26% သည် လောင်းကစားနှင့်/သို့မဟုတ် CFDs များကို ဤဝန်ဆောင်မှုပေးသူနှင့် ရောင်းဝယ်သည့်အခါတွင် ငွေဆုံးရှုံးသည်။ သင့်ငွေဆုံးရှုံးနိုင်ချေ မြင့်မားနိုင်ချေကို သင်စဉ်းစားသင့်သည်။
Forex Trading for Beginners for ကျွန်ုပ်တို့၏လမ်းညွှန်ကိုဖတ်ရန်သင်အချိန်ယူပါကယခုလုပ်ငန်းသည်မည်သို့အလုပ်လုပ်သည်ကိုအခိုင်အမာနားလည်ထားသင့်သည်။ အမှာစာများ၊ ၀ ယ်ခြင်း၊ ရောင်းချခြင်း၊ pips၊
Forex ပွဲစားသစ်တစ်ခုကိုမရွေးချယ်ခင်သင်မည်သည့်အချက်ကိုသတိပြုရန်လိုအပ်သည်ကိုလည်းကျွန်ုပ်တို့ရှင်းပြပြီးပါပြီ။ ဤအရာသည်သင့်အားအကောင့်တစ်ခုမဖွင့်မှီသင်ပလက်ဖောင်းပေါ်တွင်သင်၏ကိုယ်ပိုင်သုတေသနပြုခြင်းကိုခွင့်ပြုသည်။ သင်ဤအချိန်ကိုလုပ်ရန်အချိန်မရှိလျှင် ၂၀၂၀ အတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏ထိပ်တန်းပွဲစားရွေးပွဲ ၃ ခုကိုလည်းတင်ပြပြီးပါပြီ။
နောက်ဆုံးတွင် Forex အရောင်းအဝယ်ပြုလုပ်နေစဉ်အထူးသဖြင့်သြဇာသက်ရောက်ပါကသင်သည်မှန်ကန်သော stop-loss အမိန့်များကိုအမြဲတပ်ဆင်ရန်သေချာအောင်ပြုလုပ်ပါ။ ထိုသို့ပြုလုပ်ခြင်းဖြင့်မအောင်မြင်သောကုန်သွယ်မှုမှသင်ဆုံးရှုံးသောငွေပမာဏကိုသင်ကန့်သတ်ပါလိမ့်မည်။
Forex trading ပွဲစားသို့ကျွန်ုပ်ငွေမည်သို့ငွေသွင်းရမည်နည်း။
Forex ပွဲစားအများစုသည်ဘဏ်အကောင့်ငွေလွှဲခြင်းနှင့် debit / credit ကတ်များကိုထောက်ပံ့သည်။ အချို့က PayPal ကဲ့သို့ e-wallets များကိုလည်းထောက်ပံ့ပေးသည်။
Forex ကိုဘယ်လိုကုန်သွယ်ရမလဲဆိုတာအင်တာနက်မှာအခမဲ့သတင်းအချက်အလက်တွေနဲ့ပြည့်နေတယ်။ Forex သို့ရှုထောင့်တစ်ခုစီကိုသုတေသနပြုရန်လိုအပ်သောအချိန်ကိုဖြုန်းခြင်းအားဖြင့်သင်သည်အမှားအတွက်ကြာမြင့်စွာငွေရှာရန်အခွင့်အလမ်းအကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ ထိုသို့ပြောခြင်းဖြင့်သင်ယူမှုဖြစ်စဉ်ကိုအရှိန်မြှင့်လိုလျှင် Forex trading သင်တန်းကိုလည်းလေ့လာသင့်သည်။
Forex Trading ပလက်ဖောင်းတွင်အနည်းဆုံးအပ်ငွေဘယ်လောက်လိုအပ်ပါသလဲ။
Forex ပွဲစားတစ် ဦး တွင်စတင်နိုင်ရန်အနည်းဆုံးပေါင် ၁၀၀ ကိုသင်သွင်းရန်လိုကောင်းလိုလိမ့်မည်။
အွန်လိုင်း Forex ပွဲစားများလုံခြုံပါသလား
အကယ်၍ သင်ရွေးချယ်ထားသည့် Forex ပွဲစားသည်ယူကေကုန်သည်များကို ၀ န်ဆောင်မှုပေးမည်ဆိုပါက FCA မှစည်းမျဉ်းသတ်မှတ်ရန်လိုအပ်သည်။ ပွဲစားများဒေဝါလီခံရလျှင်၎င်းသည်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူအားအကာအကွယ်ပေးရေးအစီအစဉ်ကိုပေါင် ၅၀,၀၀၀ အထိပါ ၀ င်သင့်သည်။
အများဆုံးကုန်သွယ် Forex pair တစုံကဘာလဲ?
အရောင်းအ ၀ ယ်အများဆုံး Forex အတွဲသည်ယခုအခါ EUR / USD ဖြစ်ပြီး Fiber ဟုအမည်ပေးခဲ့သည်။
အဓိက Forex အတွဲများသို့ဘယ်လောက်ငှားနိုင်ပါသလဲ။
သင်ကဗြိတိန်တွင်အခြေစိုက်သည့်လက်လီရောင်းဝယ်သူတစ် ဦး ဖြစ်ပါကအဓိကအတွဲများ၌ ၃၀: ၁ ကိုသြဇာသက်ရောက်နိုင်သည်။ သို့သော် အကယ်၍ သင်သည်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ကုန်သည်တစ် ဦး ဟုယူဆပါက ၅၀၀: ၁ အထိရနိုင်သည်။
ငါ၏ Forex ကုန်သွယ်မှုအမြတ်ကိုငါဘယ်လိုထုတ်ယူရမလဲ။
ငွေခဝါချမှုတိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေများအရသင်သည်ငွေသွင်းရန်အသုံးပြုသည့်နည်းတူသင်၏ Forex ပွဲစားလက်ကျန်ငွေကိုပြန်လည်ထုတ်ယူရန်လိုအပ်လိမ့်မည်။
2022 ခုနှစ်၏ အခမဲ့ Forex Signals Telegram အဖွဲ့များ